April 8, 2021 - समृद्ध नेपाल
यी हुन् आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर सिन क्षेत्रमा आएका नेपाली नायिका !
जन्मिदा एउटा नाम भए पनि करियर अघि बढेसँगै आफ्नो नाम बदल्ने गरेका छन् । यसरी आफ्नो नाम बदल्नु कुनै ठुलो कुरो हैन। सिने क्षेत्रका चर्चित धेरै सेलिब्रेटीहरुको वास्तविक नाम हामीमध्ये केहीलाई मात्र थाहा होला । आज हामी तिनै नेपाली कलकारको कुरा गछौं जसले आजभन्दा करिब दुई दशकअघि नाम परिवर्तन गरेर आफ्नो नाम लुकाएका छन् ।
मिसेस श्रीलंकाको मञ्चमै भयो झ गडा !
मञ्चमै झगडा भएपछि श्रीलङ्कामा एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताकी विजेताको टाउकोमा चो ट लागेको छ। आइतवार पुष्पिका डिसिल्भाले ‘मिसेस् श्रीलङ्का’को उपाधि जितेकी थिइन्।त्यसको केही समयपछि सन् २०१९ की विजेताले डिसिल्भाको ताज खोसिन्।सम्बन्धविच्छेद भइसकेको दाबी गर्दै डिसिल्भालाई उपाधि दिइन नहुने ती पूर्वविजेताको भनाइ थियो।तर उनको सम्बन्धविच्छेद नभएको पुष्टि भएको भन्दै आयोजकहरूले उक्त उपाधि डिसिल्भालाई फिर्ता दिएका छन्।आइतवार साँझ
कुनै पनि बुबा आमा आफ्नो सन्तानको बिवाह भन्ने बित्तिकै उत्साहित नहुने त कुरै भएन् बुवा आमाको सपना नै हुन्छ । आफ्नो छोरीहरुलाई राम्रो लाएकको केटा संग बिवाह गरिदिने । अनि उनिहरुको विवाहमा आफ्नो गक्षले दाईजो दिने । यस्तैमा आज हामी तपाईहरु लाई यस्तै बिवाहको अनि दाईजोको बारेमा जानकारी दिन गईरहेका छौं । जुन अलि अनौठो
काठमाडौं । मेलम्चीको मुहान भएको हेलम्बु गाउँपालिका–१, अम्बाथानको १७ नम्बर गेट गत असार ३० मा फुट्दा पानीले इन्जिनियर सतीश गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापामगरलाई बगायो । यो घटनाको आठ महिना २० दिनपछि गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणको उद्घाटन गरिन् ।त्यसयता मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएको जस लिने राजनीतिक भाषण सार्वजनिक वृत्तमा बाक्लिएका
मधुमेह रोग भएकाहरुको लागी अचुक औषधी हो मूला !
मधुमेह रोग भएकाहरुको लागी अचुक औषधी हो मूला, जान्नुहोस मूला सेबन गर्नुका अचुकजमिन मुनी फल्ने मुला अनेक प्रजातीका हुन्छन् । विश्वको कुनै पनि ठाँउमा सजिलै उत्पादन हुने मुला तरकारी ,सलाद तथा विभिन्न रोगको लागि प्रयोग गरिन्छ । यसलाई काँचै तथा पकाएर खान सकिन्छ । यसको कलिला पातलाई साग बनाए खान सकिन्छ भने अलि छिपिएको पातलाई
स्वासप्रस्वासका समस्यालाई डिस्पनिया भनिन्छ ,यस्ता छन डिस्पनियाका समस्या ,कारण !
छिटो–छिटो सास फेर्नु वा सास फेर्न गाह्रो हुनुजस्ता स्वासप्रस्वासमा हुने असामान्य अनुभवलाई डिस्पनिया भनिन्छ ।सास फेर्नका लागि पर्याप्त वायु ग्रहण गर्न नसकेमा उकुसमुकुस भएमा वा खुलेर सास फेर्न नसक्ने अवस्थालाई पनि डिस्पनिया भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या धेरैजसो कारण मुटु र फोक्सोको असामान्य अवस्थालाई मानिन्छ । कहिलेकाहीँ तीव्र
तनाव या मानसिक चिन्ताको कारण पनि कपाल झर्ने गर्छ !
वंशाणुगत कारण शरीरमा पोषणको कमी प्रदूषण खराब खानपान अत्यधिक केमिलक भएको सामग्रीको प्रयोगका कारण धेरै मानिसहरूलाई कपाल झर्ने समस्याले निकै सताइरहेको हुन्छ ।हालैको एक अनुसन्धानले पत्ता लगाएअनुसार तनाव या मानसिक चिन्ताको कारण कपाल पनि झर्ने गर्छ । आजकलको व्यस्त जीवनमा मानिसहरूसँग खाने र सुत्ने समय हुँदैन । घरपरिवार सम्बन्ध कार्यालय काम पढाइलगायतका अन्य धेरै कारणले
सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्ने भएको छ। नगरपालिकाद्वारा बुधबार डाकिएको बैठकले रथ तान्ने र यसिं (लिंगो) पनि ठ्ड्याउने निर्णय गरेको हो।भक्तपुरका नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले विगतका दिनदेखि नै भक्तपुरले बिस्का जात्रासँग सम्बन्धित दाफा भजन गुठी लगायत सरोकारवालासँग नियमित छलफल गरी निर्णय गर्दै आएको बताउँदै भने यस वर्ष पनि जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नेछौं।छिमेकी
खस्कियो विनोद चौधरीको स्थानमा !
फोर्ब्सको अर्बपति सूचीमा रहेका एक मात्र नेपाली विनोद चौधरी यसपाली खस्किएका छन्।फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको धानाढ्यहरूको ४५औं वार्षिक सूची अनुसार चौधरी २१४१ स्थानमा छन्। अघिल्लो वर्ष उनी १५१३ स्थानमा थिए दुई वर्ष लगातार उनको वार्षिक सम्पत्ति १.४ अर्ब अमेरिकी डलर छ। सन् २०१९ मा उनको सम्पत्ति बढेर १.७ अर्ब डलर पुगेको थियो। सन् २०१७ बाट उनको
विद्यार्थी र शिक्षक बिरामी पर्न थालेपछि पाँच दिनका लागि विद्यालय बन्द !
एकपछि अर्को गर्दै विद्यार्थी र शिक्षक बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालय पाँच दिनका लागि बन्द गरिएको छ। विद्यार्थी र शिक्षकमा ज्वरो र ठेउला देखिन थालेपछि एक सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएको हो। टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ६ कोट खाल्लेस्थित स्थानीय जौनागी आधारभूत विद्यालयमा केही सातादेखि विद्यार्थी शिक्षक बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालयको दैनिक पठनपाठन बन्द गरिएको हो ।विद्यार्थी र शिक्षकमा